Ndi faịlụ ppsx na otu esi elele faịlụ .ppsx | Akụkọ akụrụngwa
Ike Microsoft bụ sọftụwia maka imepụta ihe ngosi. A na-eji ya eme ihe na nkuzi, azụmahịa na mgbakọ ezinụlọ na ndị ọzọ. Dabere na Microsoft, a na-ekepụta ihe ngosi 30 nde kwa ụbọchị. Afọ ole na ole gara aga, faịlụ PowerPoint na-agagharị n'etiti ozi ịntanetị. N’oge na-adịbeghị anya a na-eme ka mgbasa ha na-ekesa, maka abamuru nke onyinye, mana ha na-aga n’ihu ịgbasa n’ọtụtụ.
Anyị na-ekwu maka faịlụ nke ndọtị ya bụ.pps ma ọ bụ .ppsx (a na - eji ndọtị ikpeazụ a eme ihe kemgbe mbipute 2010 nke PowerPoint). Site na ngwa PowerPoint anyị nwere ike ịmepụta ma lelee ngosi gụnyere foto, ederede, ọdịyo na vidiyo, nke anyị nwere ike ịhazi ya na, oge ụfọdụ ọ bụla ma ọ bụ site na ịpị na òké ahụ, ha na-agbanwe ịgbaso usoro e guzobere mgbe e kere ya.
Nhọrọ kachasị mma na nke akwadoro iji nwee ike ịlele ụdị faịlụ a bụ ịnwe ngwa nke ejiri Microsoft PowerPoint mepụta, nke ga-enyere anyị aka ịgbanwe ha, ma ọ bụrụ na ọ bụ maka nke anyị, ma ọ bụ naanị na-ele ha site na ukara Microsoft ngwa a na-akpọ Microsoft PowerPoint Viewer, nke nwere ike ibudata ozugbo na ibe Microsoft.
Etu esi etinye Microsoft PowerPoint Viewer iji lelee faịlụ pps / ppsx
Anyị na-eleta njikọ ebe a ga-egosipụta peeji gọọmentị Microsoft ebe anyi nwere ike ibudata ihe nlele faili PowerPoint. Pịa na nbudata, ebe ọ bụ na a ga-ahọrọ asụsụ ngwa ahụ na akpaghị aka.
Mgbe ah Microsoft ga-akwado anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ibudata Okwu faịlụ onye na-ekiri na ihe nkwụnye iji chekwaa faịlụ dị ka PDF. Anyị na-aga n'akụkụ aka nri ala wee pịa Mba daalụ ma gaa n’ihu.
Na ala ihuenyo ahụ, dabere na ihe nchọgharị ahụ, ihe nchọgharị ahụ ga-ajụ anyị maka ikike iji budata faịlụ ahụ. Pịa na Save na nbudata ga-amalite.
Ozugbo ebudatara, anyị na-aga na ndekọ aha ebe ebudatara ngwa ahụ, nke na ndabara ga-abụ nchekwa a na-akpọ Downloads ma anyị mezuo ya site na ịpị ya na abụọ.
Ọ bụrụ na njikwa akaụntụ onye ọrụ rịọ ikike iji wụnye ngwa ahụ, pịa nhọrọ EE. Akwụkwọ mmado ga-apụta ebe ị gwara anyị nke usoro ikikere sọftụwia Microsoft. Anyị na-aga na taabụ dị na akụkụ aka ekpe nke igbe ahụ, anyị akara ha na n'akụkụ aka nri ala, anyị nwere ike pịa Gaa n'ihu.
Ihe ịrịba ama ga-apụta na-agwa anyị na anyị ga-aga n'ihu nwụnye ya. Pịa na nke ọzọ na windo na-esote, pịa Wụnye, Ọ gwụla ma anyị chọrọ ịgbanwe ndekọ ebe anyị chọrọ ịwụnye ya.
N'ikpeazụ akwụkwọ mmado ga-apụta nke ahụ na-agwa anyị na etinyere ngwa ahụ n'ụzọ ziri ezi. Pịa Nabata.
Site ugbu a gaa n'ihu, oge ọ bụla anyị gbalịrị imeghe faịlụ PowerPoint na ndọtị .pps ma ọ bụ ndọtị .ppsx, Onye na-ekiri Microsoft PowerPoint ga-emepe na-akpaghị aka. Otu ihe anyị kwesịrị iburu n’obi bụ ka anyị mepee ebe anyị maara ebe ha si. Ohaneze ndi enyi anyi na ezi n’ulo zitere anyi faịlị nwere pps / ppsx ndọtị nke n’enweghị ụdị nje ọ bụla. Agbanyeghị, mgbe onye bịara abịa zitere anyị faịlụ nke ụdị a, ọ bụ ihe amamihe dị na ya gafere ya na antivirus.
Mmelite ikpeazụ: Mee 2014
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » PPS. Gịnị bụ ppsx faịlụ na otu esi elele faịlụ na ndọtị .ppsx
Echere m na ihe kachasị mma bụ na ị kwadoro OpenOffice, nke bụ n'efu na ihe fọrọ nke nta freeO ka mma ka njiri mara mma karie ihe ojoo 🙂
Ezigbo isiokwu maka ndị na-eto eto nke ebe Viangre, ebe ọ bụ na ị nwere ike ịkọwa ihe dị iche n'etiti .pps na .ppt n'ihi na ọtụtụ oge ndị mmadụ na-amaghị m na-atụ m n'anya. 😉
O di nwute na enwere otutu ndi mara ihe ha bu, ha na ezite otutu otutu ndia.
Ọtụtụ oge ihe ngwọta bụ bọtịnụ nhichapụ, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ nke ọ dị mkpa iji hụ ha, m na-ahọrọ OpenOffice, ma ọ dịkarịa ala echere m na ọ bụ naanị ya na-agba ọsọ na nyiwe ndị ọzọ na-abụghị Windows, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ọ bụla ọ na-enye m ụfọdụ ịmata ịmata ngwá ọrụ a ị nụtụbeghị.
Echere m na ị gwụchara post ahụ
ezi post, ngwá ọrụ ị na-aza (onye nkiri) dị ezigbo mma ma dị mfe iji, ọ na-adọrọ mmasị na ị na-ekwu, ebe ọ bụ na n'ezie enwere ọtụtụ ndị na-amaghị ịdị adị ya, ọ bụ ezie na ọ nwere ogologo oge.
daalụ x kwuru bụ ezigbo enyemaka. Daalụ
Emechara m wụnye windo vista na mgbe m gara ịnwe ozi ịntanetị faịlụ na ext.pps ọ naghị ahapụ imeghe mgbe m wụnye PowerPointViewer.exe ịkwụsị nhụjuanya
Enweghị m ike ịwụnye onye na-ekiri ike, mgbe ihe karịrị otu awa na-eche na ihe dịka m si tinye ya na njedebe, enwetara m ozi na enweghị ike igbu
gịnị kpatara ọ ga-abụ ????
Judith amaghi m. Were bụ onye mbụ kọọrọ nsogbu na ntinye nke onye ngosi pps.
Enwere m isi okwu mana anaghị m emeghe faịlụ pps ozugbo site na ịpị ha ugboro abụọ m ga-adọkpụrụ ya na onye na-ekiri ike, tupu ha emepee mana m mepere ya dị ka ... faịlụ n'akụkụ ma ọ naghị emeghe m ekele gị nke ukwuu ị na-arụ nnukwu ọrụ na-enyere ndị anyị na-amaghị aka m nwere anya, ana m ekele gị nke ukwuu
Carlos Enwere m olile anya ime nkuzi na nso nso ihe ị jụrụ.
Ndewo nsogbu m bụ site na oge gaa ebe a ka m na-ebudata ozi ịntanetị m na PPS Format na mgbe m na-achọ ịmeghe ya na-agwa m na ike m nwere ike ghara ịmeghe ngosipụta a. Nwee onye na-ele ihe anya nke ọma ma na ndị ọzọ, Aghọtaghị m ihe kpatara na ọ na-eme ụfọdụ faịlụ na ndị ọzọ, anaghị m enyere m aka.
Zaghachi na dayanna
Amaghị m otu esi emeghe mail ma ọ bụ na enweghị m ike izipu ozi dijo
Amaghị m ihe kpatara na enweghị m ike imeghe email m ma ọ bụ zipu ma ọ bụ nata ozi.
Zaghachi na enweghị m ike imeghe mail ma enweghị m ike izipu ozi
Ezigbo mmanya: o Javi, dị ka ịchọrọ, isiokwu gị nke jikọrọ m na nnọkọ ahụ dị ezigbo mma, mana ọ bụghị nsogbu m, m na-ahụ ya n'ụzọ zuru oke na .pps okwu bụ na mgbe m dekọtara P.Point faịlụ, ọ na-edekọtara m ya dị ka .ppt ma ọ bụghị dịka .pps, amaghị m ihe kpatara ya ma ọ bụ otu esi eme ya. Ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka, ị meela nke ukwuu. Elhugo
Zaghachi ka elhugo
Isiokwu ahụ na-adọrọ mmasị, naanị m ịtinye na onye na-ekiri ya nwere onwe ya ma ọ bụghị PowerPoint nke ọ na-adabere, nke ọ bụrụ na a kwụrụ ya na enweghị ya ọ gaghị arụ ọrụ. Ọ gafere n'ekwughi otu esi kee pps: naanị mgbe ị na-azọpụta, họrọ Chekwa dị ka mgbe ahụ "Chekwa dị ka ụdị" wee chọọ * .pps na OK.
Enweela m ikike 2007 na enweghị m ike imeghe .PPS
PUTS ME NA FILI Ydị IKE Point slideE GOSI. M nye ya ka imepe m zọpụta ya: IN.
M na-edebe ya na mmiri na mgbe m chọrọ imeghe ya, ọ dịghị ihe dị ka ya na m ga-apịa ya, ọ dịghị ihe mepere emepe
ANA M AZA ỌZỌ M B TOR IF NA Ọ B BE Ọ B BE
Ismael nsogbu gị bụ na ị ga-efunahụ mkpakọrịta nke porwerpoint na faịlụ pps. I nwere ike ime ihe abuo: tinyeghachi PowerPoint 2007 ma obu tinye ihe nlere nke m kwadoro.
Emeghachila m ya ma ị nabata. N'otu aka ahụ. mgbe m meghere ya, ọ na ebu ibu ma ọ pụta pụta zọpụta na… M na-echekwa ya na mgbe m pịrị ya imeghe ya, ọ dịka ọ bụ na anaghị m enye ya, ọ nweghị ihe na-apụta.
Njirimara, ike ebe slide show ụdị faịlụ na-egosi.
Kedu ihe bụ ihe ahụ? gini mere o ji aputa? kedu ka m ga-esi gbanwee ya? n'ihi na tupu nwoke ahụ apụghị.
ekele niile !!!!!! Na n'elu nke ahụ, akwụkwọ ozi m na-ejupụta na ha na-agwa m na m ga-ahụ ha n'ihi na ha dị ukwuu
Ismael, ị nwalewo onye na-ekiri ihe m kwadoro na ibe a? bụ n'efu.
enwerem microsoft officepointpoint Viewer 2007. etinyego m ya. Ma mgbe m chọrọ imepe email nke nwere faịlụ .pps, m pịa oghe ma ọ dị ka ọ pịaghị, ọ nweghị ihe ọ bụla ma ọlị. Akwụpụwo m ma tinyeghachi ya ma ọ nweghị ihe ọ bụla
biko nyere aka !!!
Enwere m ike iche na antivirus gị (ọ bụrụ na inwere ya) na-ewere faịlụ ndị ahụ dị ka ihe dị egwu ma ghara ikwe ka ha meghee. Gbalịa wepu ya wee hụ ihe ọ bụ, mana cheta na ị ga-emegharị ya ọzọ ma emechaa.
Enwere m ya. Ihe m mere bu ilaghachi sistemu.
MGBE M JI IHE GLỌ GLỌ YLỌ NA-AKWYKWỌ, TUNEP na ihe niile m nwere ma ugbu a ọ bụrụ na m nwere ike ịhụ.
ANA M EKELE GI N'IHU NILE MA NA-agbaghara MAKA ỌRN.
M hapụrụ a okwu banyere mbanye PS3, Ọ B IFR IF na ị na-amasị ya.
Anaghị m ahụ faịlụ pps m tinyegoro onye na - eme ihe nkiri na eweghachitere m sistemụ ahụ, agụọla m okwu Ismael na achọrọ m ịma ihe bụ ihe gbasara ihe na-egbu maramara, ụda na ịmara ma ị nwere ike inyere m aka iji hụ ihe pps Daalụ.
Ndewo, enwere m nsogbu na ebe ike, ọ gaghị ahapụ m imepe ya, awụnyere m ya mana mgbe m gara ịmalite ma nye ya, ọ na-adị m ka m gafee folda, mmadụ nwere ike inyere m aka ga-enwe ekele maka ya nke ukwuu, tinye m na msn ma gwa m xxxxx
Ndewo ụbọchị ọma! Tinye faịlụ ike dị m chọrọ iji zipu site na mail ma debe ya na usoro pps, amaghị m otu m ga - esi mee nke a, ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume, m rịọ mmadụ ka ọ nyere m aka wee gwa m ... Aga m echekwa ya, m na-achọkwa ịchekwa dịka pps ọ naghị enye m nhọrọ ahụ, I meela nke ukwuu! Achọrọ m ịkele gị maka nkọwa ahụ enyere n'elu, ọ dị ezigbo mma! 🙂
Ekele, kedu ka m ga-esi chekwaa faịlụ dị ka pps na ebe ike 2007, mgbe m kwuru "Chekwa dị ka", pps apụtaghị
Ndewonu! Achọrọ m ịma otú m ga-esi nweta ike mgbe site na mail!
Ebe ọ bụ na m na-eme ya, enweghị m ike n'ihi na ọ na-agwa m na faịlụ ahụ ejughi oke ma ọ bụ ihe yiri ya.
Amaghị m ma m ga-agbanwe usoro.!
Biko ọ bụrụ na ị nwere ike inyere aka! haha
Ndewo, ajụjụ m gbasara pps bụ ihe ndị a. Mgbe m meghere hotmail m ma họrọghị "cheta data m na kọmputa a", naanị m nwere ike ịchekwa ma ọ bụ kagbuo pps, anaghị emeghe ya. Mana ọ bụrụ na m họrọ "cheta data m na kọmputa a" enwere m ike imepe ya. Ọ nwere ụzọ ọ bụla nke nhazi na-enwe ike imeghe ha si mail na-enweghị ịlele «echeta m data na kọmputa a»?
Site ugbua na-ekele gị nke ukwuu !!!
Ọ ga-amasị m ịwụnye faịlụ pps, ha zigara m msn na faịlụ ahụ enweghị m ike imeghe ya
mmanya Enwere m olile anya na ị nwere ike inyere m aka, enwere m onye na-ekiri ike na-ele ihe anya mana faịlụ m chọrọ imeghe na pps usoro niile meghere ya na okwu winword ka ọ bụrụ nke ziri ezi na n'ikpeazụ enweghị m ike ịhụ ihe ọ bụla, kedu ka m ga - esi mee ya ka m wee mepee ha na onye na-ekiri m na-atụ anya inyere m aka kelee
Ndewo, ihe dị ka ụbọchị abụọ gara aga enwere m ike ịlele pps na ha zitere m ma ọ bụghị ugbu a, m ebudatara powerpoint2007 ma ugbu a enwere m ike ịlele ha na desktọọpụ site na igbe akwụkwọ ozi m agaghị ekwe omume.
onwere onye mara ihe na eme? eziokwu bu na o na-eme m ara
Oge izizi aga m eziga mana ịhụ ihe isi ike ha nwere na ihe dị mfe kpaliri m ime ya, imeghe faịlụ na ndọtị .pps (ihe ngosi) ma ọ bụrụ na ị bu n'obi ịgbanwe ya, gbanwere ndọtị ya. ppt na ị nwere ike gbanwee ya na ike mgbe.
ara na-ara ara dijo
Enwere m mmasị na ozi gị ma ọ na-atọ ụtọ.
Daalụ maka ihe ị kwuru, ha ga-enyere m aka nke ukwuu ...
KISSES SERE ONYE Ọ B EV.
M hụrụ gị n'anya ụmụaka.
Zaghachi onye nzuzu, onye ara
Morningtụtụ ọma na ekele m niile!
N'eziokwu, saịtị a bụ ihe magburu onwe ya! Nyere na ọdịnaya ya bụ nkọwa na nghọta maka ndị ọhụụ dịka m.
Ikekwe mmadụ nwere ike inyere m aka, naanị ihe m chọrọ bụ ịgbanwe faịlụ pps ka ppt eg:
Enwere m faịlụ a na-akpọ images.pps ma achọrọ m ka ọ bụrụ images.ppt. Ọ bụrụ na m debanye aha ọzọ dị ka ụfọdụ na-adụ m ọdụ, ọ na-agbanwe aha naanị mana ọ bụghị ndọtị. Ihe m na-eme?
Zaghachi na ulpre_dg
maka ndị niile na-enweghị ike ịhụ pps na anya.
Kama iji ntụpọ ike 2007, ebudatara m 2003 ma ọ bụ aka dị nsọ, ịwụnye ma rụọ ọrụ n'emeghị ihe ọ bụla.Enweela m agụụ ike ịnwale ihe na nke a abụrụlarịrị m uru, enwere m olileanya na ọ ga-enyere gị aka
Lee, enwere m nsogbu, enweela m ike ịgụ faịlụ ndị nwere pps mana ugbu a ọ bụ naanị bitcomet ka a na-ebudatara na faịlụ a ga-ebudata ma amaghị m otu esi? Enwere m ike ịme iji gụọ ha ozugbo ma ọ bụrụ na ị nwere azịza, ebe ahụ ka ị nwere onye ozi m
daalụ maka enyemaka gị ọ bara ezigbo uru, daalụ maka ọmarịcha ọrụ gị
Ndewo mmanya, na-achọ ihe ngwọta maka nsogbu nke pps's ahụrụ m edemede gị ebe a ma ọ dị ka ọ dị mma. Olileanya ị nwere ike inyere m aka na nke a: Enwere m nnukwu faịlụ nwere faịlụ pps mana achọrọ m ịhụ ọdịnaya ha (na-emegheghị ha, naanị slide mbụ) site na onye nyocha windo ma ọ bụ site na mmemme ndị ọzọ iji hụ nke dị n'otu isiokwu ahụ. ma sonye ha n'otu faịlụ. Na ppsx faịlụ enweghị nsogbu, ọdịnaya ya na-akpaghị aka na windo nchọgharị ma ọ bụghị na pps. Daalụ n'ọdịnihu maka enyemaka gị.
Zaghachi Jose Antonio
Ndewo, chi abọọ, gaa na edemede gị ma achọrọ m ịma ma ị ga - enyere m aka na obere nsogbu. Enweghị m ike imeghe faịlụ pps m n’ihi na ọ na-agwa m na ọ bụghị ndọtị ziri ezi na win32. M arụnyela ọfịs 2007 na powerpoimt mana mgbe m mepere ozi m ọ naghị emepe m nwere windo vista Starter. Ha meghere m nke oma mana site n’otu ubochi rue na nke ozo enwere m ike imeghe ya n’eziokwu, ewepuru m ulo oru m ma meghachite ya mana amaghi m ihe m ga eme ozo, biko, o buru na inwere uzo, biko, ana m ekele gị.
ephraim lopez dijo
Onye nwere ike inye m ndụmọdụ ma ọ bụrụ na onye na-ekiri ike 2003 na-ekiri vista, 2007 na nke kachasị nso na ọ dị m ka windo 7.
ọzọ ụfọdụ programmụ ma ọ bụ ụdị na-eme ka ọkụ a onwe-executable pps faịlụ na bụ ịrụ ọrụ nke ọma na ngwa ngwa.
ihe na-eme ka ọ bara uru imeghe pps slides ozugbo na-enweghị popping si igbe.
Zaghachi ka efrain lopez
Achọrọ m ịma ma ndị na-ekiri ike na-ekiri ndị dakọtara na nsụgharị 2003 2007 vista na windo ọhụrụ 7 maka ekele ide
Enwere m Power Point 2007 na Power Point Viewer, amaghị m ihe kpatara na ugbu a enweghị m ike imeghe faịlụ ahụ na .pps na mgbatị .ppsx na-abịakwute m site na mail, ọ na-agwa m na m ga-esonye mmemme , M na-eme ya mana ọ naghị amata ya. Ọ bụrụ na echekwara m faịlụ ahụ dị ka mgbakwunye, enwere m ike imeghe ya
Nsogbu m nwere bụ na ọ ga-emepe ebe ike na 2007, mana anaghị anụ ụda ya.
Enwere m Vista na Office 2007.
Apụghị m imeghe pps faịlụ na-esi na m lelee awara awara. Enwerem ebe ekwesiri ike, achọrọ m imeghe ha na akpaghị aka. Kedu ihe m kwesịrị ịme
Zaghachi ka evet
Otu ihe a na-eme m, enweghị m ike imeghe ibe ndị ahụ, emeela m ihe niile, afọ juru m, ebe m na-ahụ azịza ndị ọzọ, daalụ
Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike inyere m aka na ihe ndị a: Enwere m ihe ngosi 3 dị iche na ike point.ppsx (office 2007), n'otu oge ahụ enwere m kaadị nlele ọtụtụ maka ihu 3 n'otu cpu. M na-emeghe na PowerPoint n'otu n'otu ma n'otu oge ahụ m na-ezigara ha na nke ọ bụla n'ime ndị nyochaa. nsogbu bụ na na mbido ma ọ bụrụ na ha na-agba ọsọ na-hụrụ na atọ Monitors, ma naanị otu na-anọgide nọ n'ọrụ ebe òké na-pịrị na ndị ọzọ na meziri adịghị anọgide na-agba ọsọ, ha na-anọgide na-agbanwe agbanwe, na ngosi ga-pịrị ma ọ bụrụ na ị chọrọ na na-agba ọsọ na ileba anya na ị chọrọ, M na-atụ m kọwara
Enweghị m ike ịgbanwe ndọtị pps ka ppt, wepụ ihe oyiyi si a pps.
Enwere m olileanya na mmadụ nwere ike ịkọwa ya maka m.
Ndewo, naanị m zụtara kọmputa na Windows 7 ma tinye m ụlọ ọrụ 2003 ebe m nwere usoro isi ike ma mgbe m natara ozi email na usoro pps enweghị m ike imeghe ha, ọ gwara m na enweghị m mmemme ọ bụla nwere ike imeghe faịlị, ebudatara m Microsoft Office PowerPoint 2007 Viewer programmụ ma m enweghị ike ịhụ faịlụ ndị ahụ.
Mana ọ bụrụ na m chekwaa faịlụ ahụ ma gbanwee usoro ka ppt ga - ahụ ya.
Achọwo m na ogwe njikwa, jikọta ụdị faịlụ na mmemme ndabara ma achọpụta m na enweghị m ndọtị pps, kedu ka m ga - esi mezie ya ka m ghara ịchekwa faịlị ma gbanwee ndọtị ahụ.
N'ihi okwu Jesusin na mgbe otu izu na-agbalị mmemme enyemaka dị iche iche, ọ dị irè iji wụnye ikike 2003, aka dị nsọ, ọ na-ekwu, ọ dị mma, na-ekele ọzọ
Jesus Sierra dijo
Obi dị m ezigbo ụtọ na ị tinyela nsogbu ịgwa ndị nke anyị ma obere ihe na nke a amachaghị banyere nke a. Ọ baara m ezigbo uru. Daalụ!
Zaghachi Jesús Sierra
I meela nke ukwuu maka ịkọwapụta ihe dị ka Chukwu zubere. Nsogbu m bu na emegoro m ihe ngosi na POWER POINT ma jisiri m ike zipu ya site na mail, ma mgbe m mepere ya ihe omume a ga-emepe ma ghara igba ihe ngosi a, ma oburu na o kweghi ka m gbanwee ya, amaghi m otu esi echekwa ya ka m ghara imeghe ya maka imezi, ma nye ya ya dika ihe nkiri.
Enwere m ekele maka onyinye ọ bụla.
ps mmemme ahụ bụ PP 2003
Enwere m nsogbu, agbalịrị m idobe pps na ọtụtụ foto, mana enweghị m ike ịchọta ya ka ọ hazie nha, yana mgbe m debechara ya na mgbe m meghere ya, ọ naghị eme ihe ngosi mana kama m mepere ya ka ọ gbanwee, dị ka Ekwesịrị m ime ya iji gafere ya dịka pps.
Sistemụ m bụ Windows 7
Biko, m ga-enwe ekele maka nkọwa ndị bụ isi, nka kọmputa m amachaghị nke ọma. Daalụ
Ezigbo mmanya, m na-agbaso ibe gị, m hụkwara n'anya na ị ga-edozi obi abụọ anyị, ruo ugbu a ọ nweghị ihe mere m, mana ụbọchị 2 gara aga otu enyi kpọpụrụ m na mmemme egwu, m wepụkwara ọtụtụ mmelite site n'aka ndị inyom di ha nwụrụ. , dị ka ha si arụ ọrụ na kọmputa m na-aga nwayọ nwayọ, n'ihi na mgbe obere oge m na-enweghị ike imeghe ozi ịntanetị m, Ndị inyom di ha nwụrụ gwara m na m kwesịrị ike anyị na ihe ọzọ, ụfọdụ microsof imeghe ya, mmanya gwara m otu m siri dozie ya, enyi m gara njem, ebudatara m msn gbakwunyere na m nwere, ma ọ bụ otu m siri edozi ya ọ dị ka m na-ehichapụ ụfọdụ mmelite, ebe ọ bụ na emelighi emelitere, ekele dị ukwuu,
otu esi bulite pps na ike
Zaghachi ka goya
Enweghị m ike imeghe faịlụ akara ike nke hotmail ruru m. Kedu otu esi edozi nsogbu ahụ? Daalụ n'ọdịnihu.
Na-ewu ewu dijo
NNỌỌ!! enyi m ga-achọ ka ị nyere m aka, Achọrọ m ịgbanwe faịlụ slide show ka ppt nwee ike gbanwee ngosi,
Zaghachi na Ailed
Daalụ nke ukwuu, ozi gị bara ezigbo uru ma zie ezi.
Enwere m nsogbu ebe ọ bụ na enwere m echiche, n'ihi na anaghị m enweta nhọrọ imeghe ma ọ bụ chekwaa na mail (dịka ọ dị na mbụ, na
Mgbe ahụ, m na-emeghe ya na nbudata na-aga na nbudata ihe nbudata, na m ga-ewepụ ka ha ghara ịdị arọ (m na-eme ... mepee. M hụrụ ya ma ọ nọrọ na mail ma anaghị m arịọ maka ihe ndị ọzọ (ma ọ bụrụ na m chọrọ ịchekwa ya A na echekwara ya dịka (ọ bụghị ugbu a) ana m ahụ ha mana m ga-ebudata ha na folda nbudata (mpịakọta site na ele ihe anya
Zaghachi to belarmina